ဤသည်၌ အခမဲ့ Excel ကို tutorialတွင် ဗီဒီယို, ငါတို့သွား ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံး Excel ကိုစားပွဲပေါ်မှာအတူတကွဖန်တီးပါ ! ကော်လံများထည့်ခြင်းနှင့်ဖျက်ခြင်း၊ အမြင့်နှင့်အကျယ်ကိုညှိခြင်း၊ အရွယ်အစားနှင့်စာလုံးကိုပြောင်းလဲခြင်းအပြင်နယ်နမိတ်များပြုလုပ်ခြင်းသည်နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
အကြီးမြတ်ဆုံးအစပြုသူအဘို့ဤ, Reserved အခမဲ့သင်ခန်းစာ ရှုပ်ထွေးဘာမှမရှိကြောင်းသင့်အားသက်သေပြပါလိမ့်မယ် တစ်ခု Excel ကိုစားပွဲပေါ်မှာ၏ဖန်တီးမှု !
Ce အခမဲ့သင်ခန်းစာ စူးစမ်းဖို့အခွင့်အလမ်းဖြစ်လိမ့်မည် သင်၏ပထမဆုံးဖော်မြူလာ နှင့်သင်၏ပထမ ဦး ဆုံး Excel ဇယား ! နမူနာဖိုင်သင်တန်းနှင့်အတူပါဝင်သည်။
အခမဲ့ - ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံး Excel ဇယား ဒီဇင်ဘာလ 28, 2020Tranquillus
လွန်ခဲ့သောအခမဲ့ - WPfusion ဖြင့်သင်၏ WordPress စျေးကွက်ကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ပါ
အောက်ပါအခမဲ့ Excel: IF function တစ်ခုမည်သို့ဖွဲ့စည်းရမည်ကိုနားလည်ခြင်း
histology နိဒါန်း- လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိ တစ်ရှူးများကို ရှာဖွေရေး